Milina fametahana fako voajanahary amin'ny fako voajanahary miaraka amin'ny mpamatsy ny rafitra fanaraha-maso hydraulic sy ny orinasa | YiZheng
Inona no masinina vita amin'ny Chain Plate Composting Turner?
ny Masinina Turner Composting Turner Machine manana famolavolana antonony, tsy dia mihinana herinaratra môtô, mihena ho an'ny fitaovam-piadiana mafy ho an'ny fandefasana, tabataba ambany ary fahombiazan'ny avo. Singa lehibe toy ny: rojo mampiasa ampahany avo lenta sy mateza. Ny rafitra Hydraulika dia ampiasaina amin'ny fampiakarana sy fampidinana, ary ny halalin'ny fihodinana dia mety hahatratra 1,8-3 metatra. Ny haavon'ny fiakarana mitsangana dia mety hahatratra 2 metatra, mijanona mandritra ny fotoana maharitra, tsy misy aeration, endrika hafa dumper afaka manao tanky fermentation telo, mampiasaMasinina Turner Composting Turner Machine, iray dia ampy.
Inona no masinina ampiasaina amin'ny ain Chain Plate Composting Turner Machine?
1. Ampiasao ny rojo rojo, fanohanana mihodina ny firafitry ny pallet, fanoherana miolakolaka mba hitsitsiana angovo, mety amin'ny fiasan'ny lalindalina.
2. Pallet Flip-up dia miaraka amin'ny fihenjanana miovaova sy ny rafitra fanalefaka elastika hiarovana ny rafitry ny fiara sy ny faritra miasa ary ny fiasa mahomby.
3. Pallet manipy flip dia miaraka amina elatra boribory miendrika akanjo azo esorina, afaka mamaky, vokarin'ny oxygen reactor.
4. Mijanona mandritra ny fotoana lava ny fitaovana ao anaty paleta, miparitaka be ary mifandray amin'ny rivotra miaraka amin'ny rotsakorana feno sy mora.
5. Ny famindrana marindrano sy avo lenta dia azo tratrarina amin'ny toerana rehetra ao amin'ny opération slot, fivezivezena miovaova.
6. Ny ampahany manainga dia mampiasa rafitra fanaraha-maso hydraulic, asa malefaka, azo antoka ary mahomby.
7. Fanaraha-maso lavitra ny fiaramanidina mandroso, fiovan'ny marindrano, miolakolaka ary miverina haingana ary fiasa hafa hanatsarana ny tontolon'ny asa.
8. Famahanana fitaovana slot azo alaina, fitaovana famoahana mandeha ho azy, efitrano fanamasinana masoandro ary rafitra fanamoriana rivotra.
9. Mitambatra fiasan'ny fitaovana mihodina, mifehy ny porosity, mamatsy oksizenina ary transposition material.
10. Rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy miaraka amin'ny switch switch sy fanaraha-maso lavitra.
11. Miaraka amin'ny fitaovana fanodinana slot dia afaka mahatsapa ny fiasan'ny masinina maro karazana slot, mitahiry vola.
Chain Plate Composting Turner Machine Fitsipika miasa
Ny rafitry ny Masinina Turner Composting Turner Machine manangana fitsipika miovaova hafainganam-pandeha miovaova, izay manana adaptability tsara amin'ny fitaovana isan-karazany, mihazakazaka mihazakazaka, mahomby mihodina avo sy miasa lalina. Izy io dia afaka hanafohezana ny vanim-potoanan'ny fermentation ary hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra. Ny fampiasana rafitra haingam-pandeha haingam-pandeha miovaova dia afaka miovaova amin'ny fiovan'ny asa.
Fampisehoana horonantsary lozisialy vita amin'ny rojom-bary
Safidy maodely Composting Turner Machine Model
Sakan'ny takelaka rojo
Hafainganana tsy misy enta-mavesatra
Ny sakan'ny tanky misy fermentation
Haavo ny fitoeran-drano misy fermentation
Famindrana fitaovana isaky ny fihodinana
Haavo avo indrindra
Teo aloha: Turner Composting Type Groove
Manaraka: Crawler Type Organic Waste Composting Turner Machine Overview